Apple dia manomana headphones vaovao tsy misy tariby ho an'ny iPhone 7 | Vaovao IPhone
Ny tsy fisian'ny seranan-tsambo fakan-tsarimihetsika amin'ny iPhone 7 manaraka dia manome lalao maro, ary toa hampiasa marika am-peo manokana ny Appel, Beats, hamoronana modely natao voalohany voalohany hatramin'ny nahazoana azy. herintaona sy tapany lasa izay. Ao Cupertino dia manomana headset tsy misy tariby izy ireo, saingy tena tsy misy tariby, nefa tsy manana ny tariby mahazatra mampifandray headset iray amin'ny iray hafa., ary hampifandraisina amin'ny alàlan'ny Bluetooth amin'ny iPhone vaovao izy ireo. Ny tranga iray izay hiasa ho toy ny charger dia hamita ny seta izay amidy ho fitaovana tsy miankina amin'ny iPhone 7.
Tsy foto-kevitra vaovao noforonin'i Apple izy, lavitra azy io, saingy hatreto dia mbola kely no nitombo noho ny olan'ny fahaleovan-tena nateraky ny zava-misy fa ny headset tsirairay dia tsy maintsy manana mpandray ampidirina satria tsy misy fifandraisana amin'izy io. Apple dia hiasa tsara amin'ity olana ity ary afaka manolotra headphone izay tsy mila tolotra fanampiny fanampiny hatramin'ny 4 ora fizakantena. Fa koa Hanana fonony izy ireo izay, ankoatry ny fampiarana azy ireo, dia ahafahana mameno indray ny headphone tsy mila mampiditra azy ireo amin'ny fitaovana fanampiny.
Headphones tena mitovy amin'izany no natolotr'i Earin tao amin'ny Kickstarter herintaona sy tapany lasa izay, tetik'asa nahatratra ny tanjony hahafahana mampivoatra. Ireto headphones Earin ireto, izay mitovy amin'ny famaritana izay navoakako teo aloha, no hita amin'ireo sary hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity. Amin'ny CES 2016 indrindra, dia misy maodely mitovitovy hitany, izay samy manana ny vidiny lafo avokoa: VerveOnes ($ 249), Kanoa ($ 299) na Bragi ($ 299) ohatra vitsivitsy monja ireo ho fanampin'ireo efa voatondron'ny Earin. Ho hitantsika ny vidin'ny fandefasan'i Apple ny headphones vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Apple dia manomana headphones tsy misy tariby vaovao ho an'ny iPhone 7
Hiasa ao Ipad ve izy ireo miaraka amina fampidirana ligting?
Vaovao IPad dia hoy izy:
Izy ireo dia headphones Bluetooth. Tokony hiasa amin'ny fitaovana taloha izy ireo
Valio ny iPad News